Talooyin lagu Baranayo Dugsiga Sare ee Dibadda 2022
Tilmaamaha lagu baranayo Dugsiga Sare ee Dibadda
Markaad dhallinyar tahay, waxaad la kulantay su'aasha ugu muhiimsan ee noloshaada iyo mustaqbalkeeda mustaqbalka - maxaad dooneysaa inaad sameyso markii dugsigu dhammaado? Tani badanaa waxay sidoo kale sabab u tahay markay dhalinyaradu bilaabaan inay ka walwalaan shaqadooda oo ay eegaan fursadaha sida dibedda wax looga barto.
Barnaamijyada dugsiga sare ee ka baxsan dalkaaga waa rajo xiiso leh oo geesinimo leh oo wax badan kaa bari doonta nolosha oo aan fasal weligiis awoodin. Dugsiga sare ee horay loo sii cayimay wuxuu noqon karaa mid fudud oo xiiso leh, laakiin sidoo kale waa mid ku habboon oo aan lahayn soo-gaadhistii aad u baahan tahay inaad ku korto nolosha.
Haddii aad rabto inaad kor u qaaddo dadaalkaaga oo aad u dhaqaaqdo hal inji oo u dhow himilooyinkaaga waaweyn ee xirfadeed, markaa waa inaad xiriir barnaamijyada simistarka dugsiga sare ee dibadda si aad wax badan uga ogaato iyaga iyo sida ay kuu caawin karaan.
Waa kuwan waxyaabo ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad qorsheyneyso inaad wax ku barato dugsi sare oo dibedda ah.
Ogow halkaad u socoto
Isbarbar dhig barnaamijyada
Isku soo wada duuboo dhaqaalahaaga
Intaadan bilaabin inaad fiiriso barnaamijyada dibedda, waxaad u baahan tahay inaad qiimeyso hadafyadaada. Maxaad u dooneysaa inaad ku sameyso meel ka baxsan dalkaaga si kastaba ha noqotee? Xirfado noocee ah ayaad rabtaa inaad barato? Weydii su'aalaha saxda ah ee ku saabsan waxa aad rajeyneyso inaad ka faa'iideysato khibradaas oo kaa caawin doonta xulashada barnaamijka saxda ah.
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad tixgeliso qabanqaabada saadka. Tusaale ahaan, immisa waqti ayaad haysataa? Ma waxaad haysataa simistar kaliya oo aad ubogto ama ma baran kartaa sanadka oo dhan? Miyaad ku tiirsan tahay deeqaha waxbarasho ama ma awooddaa inaad iskood u maalgeliso waxbarashadaada? Intaad qiimeyneyso waxyaabahan, xusuusnow faa'iidooyinka barashada dugsiga sare ee dibadda.
Marka aad tilmaamto yoolalkaaga, talaabada xigta waa inaad khariiddo ujeedooyinkaaga oo aad tillaabooyinka ugu horreeya u qaaddo dhinaca saxda ah.
Waa inaad bilowdaa inaad raadiso barnaamijyo waafaqsan ujeedooyinkaaga. Khubarada qaar waxay kugula talinayaan sameynta warqad-xisaabeed si ay kaaga caawiyaan inaad yareyso raadintaada. Waxa kale oo aad la hadli kartaa la-taliyeyaasha mihnadda si aad u gaadho go'aan aqoon leh.
Hadda waxaad buuxisay oo aad kaydisay xaashiyaha macluumaadka dhammaan barnaamijyada daraasadda ee dugsiga sare, waa waqtigii la isbarbar dhigi lahaa midba midka kale si loo ogaado midka ku siinaya ugu badnaan ee kuu keenaya isla markaana kuugu dhow inaad gaarto yoolalkaaga shaqo. Sida ugu wanaagsan ee taas lagu sameyn karaa waa iyadoo lala hadlo dadka.
Waad la xiriiri kartaa alumni ama ka hubi kartaa dib u eegista khadka tooska ah si aad u fahamto waxa barnaamijka ka mid yahay iyo sida ay uga faa'iideysatay kuwa kale. Sidoo kale waa inaad raadisaa xulashooyinka deeqaha waxbarasho oo kaa caawin kara inaad bixiso sanad ama simistar dibedda ah.
Waxbarashada Caalamiga ah heer kasta oo ay noqon kartaa arrin qaali ah. Si kastaba ha noqotee, qorsheyn sax ah, waxaa suurtagal ah in laga dhigo mid dhaqaale ahaan macquul ah. U fiirso maalgashi ku saabsan mustaqbalkaaga oo maskaxda ku hay in lacagtoodu aysan ka badin karin khibradda noocan ah.
Si kastaba ha noqotee, su'aashu waxay tahay - sidee ayaad ku bixin doontaa? Marka laga soo tago caqiidada guud, ikhtiyaarka lagu bixinayo dugsigaaga sare ee dibadda ma ahan mid xun sida ay u muuqan karto.
Waxaad ka codsan kartaa waalidiintaada inay ku maalgeliyaan ama aad ka fikirto inaad shaqeyso waqti dhiman si aad lacag ugu keydiso waxbarashadaada. Barnaamijyada qaarkood xitaa waxay kuu oggolaanayaan inaad dalbato deeqo waxbarasho haddii aad tahay arday u qalma.
Marka waxyaabaha aasaasiga ahi ka baxaan jidka, waa waqtigii la samayn lahaa arjiga ugu dambeeya. Hubso in barnaamijku buuxiyo yoolalkaaga iyo shuruudaha miisaaniyadda. Si buuxda dib ugu eeg arjigaaga waa khalad-la'aan si loo hubiyo in si habsami leh loo socodsiiyo.
Waxay noqon kartaa xoogaa ka hor intaadan dib uga maqlin iyaga. Markaa sabar oo sii wad arjiga ilaa aad ka guuleysato.
Hadda oo aad soo gashay, waxaa la joogaa waqtigii la qorshayn lahaa safarkaaga. Waxaad u baahan doontaa inaad kala soocdo faahfaahin badan, sida tallaalka, caymiska, faahfaahinta bangiga, baasaboor, fiiso, tigidhada duulimaadka iwm.
Samee liis hubineed oo ku saabsan dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor intaadan u dhaqaaqin safarkaaga weyn.
Si looga fogaado inaad dareento khayaano isla markiiba kahor intaadan xirxirin, waxaad u baahan tahay inaad baarto meesha aad ku socoto si aad u ogaato waxyaabaha aad u baahan doonto. Sidoo kale waa inaad iskaa wax u barataa caadooyinka guud iyo labbiska habboon. Hubso inaad ka hubiso la-taliyaha barnaamijka si aad u ogaatid liiska waxyaabaha lagu taliyay.
Kaliya raac talaabooyinkan si aad uga dhigto habka arjigaaga mid sahlan oo aan cabsi lahayn. In kasta oo ay caadi tahay in lagu raaxeysto safarkaaga, haddana sidoo kale waa lagama maarmaan in la ilaaliyo himilooyinkaaga oo laga faa'iideysto khibraddaada dugsiga sare ee dibadda. Haddii si sax ah loo sameeyo, waxay xoojin kartaa codsiyadaada kuleejka waxayna ku riixi kartaa xirfaddaada jihada saxda ah.
Previous Post:Maxay Tahay Sababta Tijaabooyinka Shaqada Kahor Ay yihiin Qalabyada Shaqaaleysiinta Virtual-ka Ugu Muhiimsan Dunida Kadib-COVID
Post Next:Maxay Yihiin Noocyada Kaladuwan ee Cilmu-nafsiga iyo Doorkooda
Pingback: 15ka ugu sarreeya Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee La Aqoonsaday 2022
xirfadaha shaqada wuxuu leeyahay,
September 2, 2021 at 2: 53 pm
Muse wuxuu leeyahay,
September 2, 2021 at 2: 48 pm
waan ku faraxsanahay inaan booqdo goobtan..mahadsanid